Carbon na uwa: mkpa na isonye | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ụwa anyị, e nwere gas na ihe ndị dị mkpa maka ndụ. Ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị a na gas na-adabere na ọrụ nke ọ bụla na ihe omume na-eme n'ụwa niile. Taa, anyị ga-ekwu maka ya carbon na ọdịdị. Enwere ike ịchọta kabọn dị iche iche na ụwa anyị dịka mmanụ, eserese, diamond, na ndị ọzọ. Ọ bụ ihe mejupụtara kemịkal nke nwere ọkwa isii na tebụl oge na-abụghị nke ọla.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na mkpa nke carbon n’okike.
2 Ebee ka carbon dị na ihe okike?
2.1 Stalldị crystalline
2.2 Ordị amorphous
3 Biogeochemical nke carbon na okike
Carbon bụ tetravalent chemical element. Nke a pụtara na ọ na-agbapụ site na ịtọlite ​​njikọ kemịkal 4 nke ndị elektrọn ma ọ bụ nkekọ covalent. Ọ bụ mmewere nwere oke ụba n'ụkpụrụ ụwa. Abundancebara ya dị n'ụdị n'ụdị ya. Nke a bụ n'ihi na ọ dị na nguzobe ogige ma nwee ikike pụrụ iche iji mepụta polymers na okpomọkụ a na-ahụkarị na ụwa anyị. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ dị ka ụdịrị n'ụdị ndụ niile amaara ama.
A na-ahụ carbon na ọdịdị dị ka ihe na-eme ka mmiri ghara ịdị na ụdị ndị ọzọ. Maka ọtụtụ akụkụ, a na-ejikọta ya na kemịkal carbon carbon dị ka calcium carbonate na ogige ndị ọzọ dị na mmanụ na gas. A pụkwara ịchọta ya n'ụdị mineral dị iche iche dị ka unyi, lignite na peat. Ihe kachasị mkpa carbon bụ na ọ dị na ihe niile dị ndụ.
Ebee ka carbon dị na ihe okike?
Dịka anyị kwurula na mbụ, a chọtara carbon n'ụdị niile nke ụdị ndụ ma dịrị n'ụdị kristal dum: diamond, graphite na fullerene. Anyị nwekwara ike ịhụ ụdị amorphous ndị ọzọ amorphous na kol dị ka lignite, coal, peat, na ụdị mmiri dị iche iche dịka mmanụ na gas dị ka gas. Anyị ga-edepụta nke ọ bụla n'ime ha ma mara ha.
Ihe osise: Ọ bụ ihe siri ike nke nwere agba ojii ma nwee ọkụ na-eguzogide ọgwụ. Ọ nwere usoro mkpuchi dị ka amị carbon jikọtara ọnụ site na nkekọ hexagonal. Atọm ndị a jikọtara ọnụ iji mepụta akwụkwọ.
Diamond: ọ bụ ụda jọgburu onwe ya nke nwere ike ịhapụ ka ìhè gafere. A na-ejikọta mkpụrụ carbon dị na diamond na tetrahedral.
Fullerenes: Ha bụ ụdị carbon nke nwere mkpụrụ ndụ nke na-akpụ ụyọkọ na ọtụtụ atọm na ụfọdụ n'ụdị ọdịdị dị ka bọọlụ bọọlụ.
Na nke a, atọm carbon anaghị emekọ ọnụ ma ọ bụ mepụta usoro anaghị agbanwe agbanwe. Ha na-enwekarị adịghị ọcha na ihe ndị ọzọ. Ka anyị nyochaa ihe ha bụ:
Anthracite: Ọ bụ nke kacha ochie metamorphic coal mineral dị adị. Isi mmalite ya malitere na mgbanwe nke okwute nke sitere na mmetụta nke ọnọdụ okpomọkụ, nrụgide na ọrụ kemịkal nke mmiri na okike. Tumadi ha kpụrụ na Carboniferous oge.
Kol: ọ bụ kol na-arụ ọrụ na kpụrụ nkume sedimentary nke sitere na organic. Nhazi ahụ mere n'oge Paleozoic ma ọ bụ oji na agba. Ọ nwere nnukwu ọdịnaya nke bituminous bekee.
Lignite: Ọ bụ coal fosil coal nke sitere na peat site na mkpakọ dị elu.
Peat: Ọ bụ ihe sitere n'okike sitere na oge Quaternary na nke dị nso karịa icheku gara aga. A na-ahụkarị ya site na ịnwe agba aja aja na-acha aja aja yana oke ya dị na njupụta. O sitere na irighiri ihe ọkụkụ.
Mmanụ na gas: ha bụ mmanụ fosil kacha mara amara na ụwa niile. Ihe mejuputara ha bu ihe ndi mejuputara aru, otutu ha bu hydrocarbons. A na-akpụ hydrocarbons ndị a site na decomposition nke nje anaerobic nke ihe na-edozi ahụ. N'ihi nke a, nhazi ya na-ewere ọnọdụ n'ime ala dị omimi na n'okpuru ọnọdụ anụ ahụ na kemịkal pụrụ iche. Nke a bụ usoro nke were ihe karịrị ọtụtụ nde afọ.
Biogeochemical nke carbon na okike
Igwe carbon bụ otu usoro dị mkpa maka ndụ na ụwa anyị. Ọ bụ maka mgbanwe nke gas a na ụwa dum. Enwere ike gbanwere n'etiti biosphere, ikuku, lithosphere na hydrosphere. Ihe omuma nke usoro ihe omuma nke carbon a bu ihe na enyere anyi aka igosiputa ihe mmadu n'omume a. Ọ bụ ya mere anyị ji nweta ozi ndị Iberia dị mkpa banyere ihe ụmụ mmadụ nwere na mgbanwe ihu igwe ụwa.
Ọ bụkwa carbon nwere ike ịgagharị n’etiti oke osimiri na oke mmiri mmiri ndị ọzọ. O nwekwara ike igbasa n’etiti ala dị egwu, ala, ikuku na mbara ala. Soro na usoro dị ka photosynthesis nke osisi na-ejide carbon dị na ikuku iji mepụta oxygen site na mmeghachi omume kemịkal. Foto a na-enye ohere ka carbon dioxide na mmiri nke ike anyanwụ na chlorophyll mepụtara site na osisi iji mepụta carbohydrates ma ọ bụ sugars. Oxygen bụ ihe mkpofu nke mmeghachi omume ndị a.
Carbon a dịkwa na usoro okike dịka iku ume na ire ere. Usoro ihe omumu ihe ndia bu ihe omuma nke ịhapụ carbon n'ime gburugburu ebe obibi dika carbon dioxide ma obu methane. Methane ga-adị mgbe niile mgbe enwere ire ere na enweghị ikuku oxygen.
Carbon dị na ọdịdị na-arụ ọrụ dị mkpa na usoro usoro mbara igwe. Usoro nhazi ala a na - eme n'ihi oge. Ọ bụ ebe a ka carbon site decomposition anaerobic nwere ike gbanwee ghọọ mmanụ ọkụ dị ka mmanụ, gas na kol. Na mgbakwunye, carbon a nwere ike ịbụ ma bụrụ akụkụ nke mineral na nkume ndị ọzọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mkpa carbon dị na okike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Carbon ke uwa